अपडेट: ड्युटी अफिसर सहित इनिस्पेक्टर मल्ल परे छानबिनमा ! | CNNepal
अपडेट: ड्युटी अफिसर सहित इनिस्पेक्टर मल्ल परे छानबिनमा !
काठमाडौं । ललितपुर स्थित महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीबाट गए राती तीन जना थुनुवा फरार भएपछि प्रहरी संगठनमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
ड्युटी अफिसर र इन्चार्ज (इनिस्पेक्टर) किरण मल्ल समेत छानबिनको् घेरामा परेका छन् । उनीहरुलाई निलम्बन गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । डिउटी अफिसर र इन्चार्ज (इनिस्पेक्टर) मल्लसहित चार प्रहरीलाई तत्कालै थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
गए राति प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीबाट थुनामा रहेका रविन तिमिल्सेना, सम्शेर माझी र रुद्रलाल श्रेष्ठ थुनुवा कक्षको ग्रील तोडेर फरार भएका थिए। घटना बारे थप अनुसन्धान गर्न एसएसपी किरण बज्रचार्यको नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाइएको छ।
उहाँ फिल्डमा खटिइसक्नु भएको छ । इनिस्पेक्टर मल्ल सहित ड्युटी अफिसर र थुनुवा कक्षमा खटिएका २ प्रहरीसहित चार जनामाथी तत्काल अनुसन्धान हुन्छ । मुख्य गरि थुनुवा कक्ष डिउटीमा खटिएकाहरुलाई बिशेष अनुन्धान हुने छ ।
Previous articleललितपुर स्थित भैसेपाटीबाट तिन जना थुनुवा फरार
Next articleराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राष्ट्र बैंकको भवन शिलान्यास